चैत १ र २० वर्ष पूराना गाडी : व्यवसायीको व्यङ्ग्य–‘फलामको उमेर हुँदैन हाकिम सा’व’
यमुना भण्डारी, प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण २९ मंगलबार , ४,४४६ पटक हेरिएको
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले २०वर्ष पूराना सार्वजनिक सवारी साधन आउने चैत १ गतेबाट पूर्ण रुपमा बन्द गर्दै छ । त्यस्ता सवारी साधन चलाउन रोक लाइसकेपछि पनि बाटोमा गुडेको देखिए जफत गरेर लिलाम गर्ने तथा ठाउँको ठाउँ जरिवाना गराउने विभागको तयारी गरेको छ ।
फागुन मसान्तसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसीस नम्बर’ विभागमा बुझाउन सवारीधनीलाई भनि सकिएको छ । विभागका सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्याल भन्छन्, ‘हामीले भेटे हामीले । ट्राफिकले भेट ट्राफिकले पकडिन्छ । यो देशभर नै लागू हुन्छ । देशभर विभागले खटाएका मान्छेहरु खटिन्छन् ।’ कोही उम्किनपाउँदैनन् । उनका अनुसार नियम उल्लंघन गरे ५ हजार ठाउँको ठाउँ जरिवाना लाग्नेछ ।
उनले अबत्यो पूराना गाडिको अनुमति नविकरण पनिहुँदैन भने । केहीदिन अघि विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले,‘चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी सडकमा गुडे ‘सीज’ गरी सरकारले लिलाम गर्छ, यसैले फागुन मसान्तसम्म पुराना सवारी व्यवस्थापनको सबै काम सक्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ’ भनेका थिए ।
पूरानो भनेर कसरी छुट्याउने ?
सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘बिलबुले छुट्याइन्छ । इन्जिन, पाटपूर्जाबाट पनिथाहा हुन्छ ।’ अनुगमन गर्ने टोलीले हेर्छ । यो निर्णय दुई वर्षअघि गरिएको पनि उनले बताएका छन् । अब चैत १ को भाषा सार्ने होलानि? जवाफमा उनले भने, ‘सर्दैन । यो हामीले गरेको होइन । यो सरकारले २ वर्ष अघि नै गरेको निर्णय हो ।’ हामीले सूचना दिइसकेका छौँ ।
पूरानोका ठाउँमा नयाँलाई अनुमतिदिने हो ?
उनले भनेका छन्, ‘पूराना गाडी त्यही ५५ सय ६ हजार हाराहारीमा छन् । सवारी कमहुँदैन । किनचाहियो र ?’
व्यवसायीलाई कसरी मनाउने ?
व्यवसायीहरुले मान्नु हुन्छ, उनले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ । पूरानो गाडिले गर्दा धेरै दुर्घटना भएका छन् । अर्कोतिर प्रदूषण भइरहेको छ ।’ उहाँहरु पूरै जानकार हुनुहुन्छ ।विभागले देशभर गुड्ने २० वर्ष पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटनामा समेत बढ्न थालेपछि चैतदेखि हटाउने निर्णय गरेको हो ।
विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ संशोधन गरी चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन लागेको छ । विभागले गतवर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो ।
विभागले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधनभने गुड्न दिइने जनाएको छ ।अहिले उपत्यकामा ६००विद्युतीय टेम्पो र उपत्यकाबाहिर २००टेम्पा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार गएको असोजमै ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनलाई ३० वर्षसम्म चल्नसक्ने सूचना गरिसकिएको छ ।
व्यवसायीको माग के हो ?
यातायातव्यवसायीले दिनगनेर पूरानो भन्दै कुनै मापदण्ड विना हटाउन नमिल्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘फलामको उमेर हुँदैन । खराबी छ भने हामी २० वर्ष के, पाँचवर्ष पूराना गाडी पनि हटाउन सक्छौँ । तर, त्यसको प्राविधिकपक्ष के ? कसरी त्यसको मूल्याङ्कन व्यवस्थापनगर्ने ? हामीलाई एकपटक सोध्नु पर्दैन ?’ उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे ।
के तपाईहरुलाई सोधिएको छैन त अहिलेसम्म ? जवाफमा उनले भने, ‘हामीसँग यो विषयमा छलफल भएको छैन । यो प्राविधिक विषय हो । हाम्रो माग यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यस्थापन हुनुपर्छ । फलाम पूरानो भयो भन्न मिल्दैन । कोही पूराना गाडीको अवस्था पनि राम्रो छ । त्यसलाई मर्मत गरी चलाउन सकिन्छ । दिनगनेर हटाइनु हुँदैन ।’
उनले यातायात विभागसँग गाडीको प्राविधिक जाँच गर्ने इन्जिनियर समेत पर्याप्तनभएको बताए । उनले भने, ‘इन्जिनियर पनि उहाँहरुसँग पर्याप्त छैनन् । भएका थोरैले यसमा स्वार्थ राखेका छन् ।’ तर, उनले के स्वार्थ भनेर भनेनन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले बारम्बार यो विषयमा बसेर समीक्षा गरौँ भनेका छौँ । तर, विभागले मानेको छैन ।’ पहिले इम्बोस्ड नम्बरमा पनि हामीले भन्दाभन्दै मानेन, पछि सर्वोच्चले वितरण रोक्यो ।
तर, विभागले नियमावली संशोधन गरेर गएको वर्ष कात्तिकमै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७४ फागुन मसान्तसम्म देशभर रहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने भनिसकेको छ ।
के गर्नु हुन्छ त ?
उनले भनेका छन्, ‘३० गते केन्द्रीय समितिको बैठक छ । त्यो बैठकमा छलफल हुन्छ र, विभागले गाडी चलाउन नदिने नै हो भने त्यहीअनुसारको निर्णय हुन्छ ।’ विविध विषयमा छलफल हुन्छ र, आधिकारिक धारणा आउँछ ।
खोजेको के हो ?
महासचिव सिटौलाका अनुसार सरकारले सहुलीयत दिनुपर्छ । सहुलीयत के माभन्नु भा, नयाँल्याउँदाभन्सार छुट दिनु पर्छ भनेको ? जवाफमा उनले भने, ‘हो हामीले प्राविधिक रुपमा हटाउने नै भएभन्सार छुटको सुविधा हुनुपर्छ भनेका छौँ । सरकारले सहुलीयत दिनु पर्छ । हाम्रो माग यही हो ।’
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति, पत्रकार सम्मेलन गरी जनाउ
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, पक्राउ परेका व्यवसायी नछाडे थप आन्दोलन
सिन्डिकेट बिरुद्ध आक्रमक बन्यो सरकार, यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने
यातायात बन्दले यात्रुलाई तनाव
यातायात ठप्पः हामी हार्दा सरकारले खुशीयाली मनाउँदैन –सिटौला